"Indawo yokuhlala kwiSidiliya", iimbono zolwandle / ipaki, ii-e-bikes ezi-2 - I-Airbnb
"Indawo yokuhlala kwiSidiliya", iimbono zolwandle / ipaki, ii-e-bikes ezi-2
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTarja & Erkki
UTarja & Erkki yi-Superhost
Umxholo wale ndlu uthi "Ikhusi esidiliyeni" kuIsaya 1:8 - njengoko iZikron ijikelezwe zizidiliya. Indlu isandula ukulungiswa. Kukho iinkcukacha ezininzi ezizodwa njengetafile yesiqu somthi waseJavan. Ibhedi yenzelwe umthi waseAfrika kwaye inendawo yokugcina ngaphantsi. Ikhitshi ligcwele izixhobo zombane. Le ndlu ineeyunithi ezimbini ze-A/C kunye nebalcony enkulu efihlakeleyo ene-180 degrees yembono yepanoramic ejonge eLwandle kunye neRamat HaNadiv National park. 2 iibhayisekile ze-E! Ividiyo yeYouTube: "Ikhusi kwiSidiliya".
Le ndlu ikwindawo ephakamileyo yeemitha ezili-150 ukuphakama kweNtaba yeKarmele. Ibalcony ejonge ngasentshona ishushu ngamaxesha obusika, kodwa impepho epholileyo evela kwiMeditera iyigcina ikhululekile nasehlotyeni. I-Sofa kwigumbi lokuhlala yibhedi yesofa ye-2. I-Wi-Fi, i-laptop, i-laser printer kunye ne-TV. Ii-E-bikes ezi-2 ezityebileyo simahla kodwa kuxanduva lwakho olupheleleyo, kunye neengxowa kunye namandla aneleyo okuqhuba ukuya elwandle kunye nokubuya. Igumbi lokugcina elisezantsi kunye nokugcinwa phantsi kwebhedi lijongene neemfuno zokugcinwa kweengxowa zakho njl njl. Bona ividiyo ye-youtube: "Indawo yokuhlala kwiSidiliya"!
IZichron Ya'akov yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwaSirayeli. Apho ufumana uxolo kunye nokuzola, kodwa kuninzi okubonayo kunye namava akufutshane aqala kwimyuziyam yezobugcisa esecaleni. Idolophu ngokwayo ibonelela ngedrama ngendlela yeMyuziyam ye-Nili kunye ne-Aliyah-ethetha ngokuqala kokuzaliseka kweziprofeto zikaThixo malunga nokubuyiselwa kukaSirayeli. Isidlo sakusasa sifumaneka kwi-Hotel Eden Inn engummelwane - ngentlawulo ye-65/85 NIS. Idama labo lingasetyenziselwa iishekele ezingama-50 ngosuku/umntu.
Umbuki zindwendwe ngu- Tarja & Erkki
Sinoncedo lwasekhaya, kodwa ngenye indlela abafowunelwa nge-imeyile yethu okanye umyalezo we-txt.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zihron Ya'akov